Asomafo Nnwuma 27 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Asomafo Nnwuma 27:1-44
27 Afei bere a wosii gyinae sɛ yɛnkɔ Italia+ no, wɔde Paulo ne nneduafo foforo hyɛɛ ɔsraani panyin bi a wɔfrɛ no Yulio a ofi Augusto asraafokuw mu no nsa. 2 Bere a yɛkɔforoo hyɛn bi a efi Adramitio rebɛsen akɔ mmeae a ɛwowɔ Asia mantam mu no, yesii kwan so a na Aristarko+ a ɔyɛ Makedoniani a ofi Tesalonika no ka yɛn ho. 3 Ade kyee no, yegyinaa Sidon, na Yulio yii yɔnkodɔ+ adi kyerɛɛ Paulo maa no kwan sɛ ɔnkɔ ne nnamfonom nkyɛn ma wɔnhwɛ no.+ 4 Na yefi hɔ faa nsu so no, yɛde yɛn ani kyerɛɛ baabi a ɛbɛma Kipro agye yɛn afi mframa ano, efisɛ na mframa no rebɔ hyia yɛn; 5 na yɛnam po so faa Kilikia ne Pamfilia kogyinaa Mira a ɛwɔ Likia. 6 Na ɔsraani panyin no huu hyɛn bi a na efi Aleksandria+ rekɔ Italia, na ɔma yɛforoe. 7 Afei, bere a nkakrankakra yɛbrɛe de nna pii duu Knido no, yɛde yɛn ani kyerɛɛ baabi a ɛbɛma Kreta a ɛwɔ Salmone agye yɛn afi mframa ano, efisɛ na mframa no siw yɛn kwan, 8 na yɛde animia twaam hɔ beduu baabi a wɔfrɛ hɔ Hyɛn-Agyinae Pa, a Lasea kurow no bɛn hɔ no. 9 Ná yɛakyɛ, na na ɛyɛ hu sɛ yɛbɛtoa akwantu no so efisɛ na mpata da+ mmuadadi bere no mpo atwam; enti Paulo de nyansahyɛ mae, 10 ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mmarima, mitumi hu sɛ po so akwantu yi betumi akowie adesɛe ne adehwere kɛse mu; ɛnyɛ hyɛn no ne emu nneɛma nko na ɛho bɛka, na mmom yɛn akra nso.”+ 11 Nanso, ɔsraani panyin no tiee ɔhyɛnkafo ne hyɛn wura no mmom sen nea Paulo kae no. 12 Afei esiane sɛ na hyɛn gyinabea hɔ nye mma awɔw bere nti, nnipa dodow no ara kae sɛ yemfi hɔ nhwɛ sɛ yebetumi akodu Foinise, Kreta hyɛn gyinabea a ɛhwɛ atifi fam apuei ne anafo fam apuei no, akodi awɔw bere no wɔ hɔ anaa. 13 Na bere a anafo fam mframa no bɔɔ brɛoo no, ɛyɛɛ wɔn sɛ nea wɔatumi ayɛ nea wɔbɔɔ wɔn tirim sɛ wɔbɛyɛ no ara, enti wotuu sɛkyɛ no de wɔn ani kyerɛɛ Kreta mpoano. 14 Nanso ankyɛ na mframa+ kɛse bi a wɔfrɛ no Eurakilo bɔɔ denneennen. 15 Na bere a ɛyeree hyɛn no denneennen na antumi annyina mframa no ano no, yegyaa mu ma ɛde yɛn kɔe. 16 Afei yɛde yɛn ani kyerɛɛ baabi a ɛbɛma supɔw ketewa bi a wɔfrɛ no Kauda agye yɛn afi mframa ano, nanso yɛbrɛɛ mu ansa na yɛn nsa reka hyɛmma+ ketewa no. 17 Na bere a wɔmaa so baa soro no, wofii ase de nneɛma kyekyeree hyɛn no; na esiane sɛ na wosuro sɛ ɛbɛkɔ akɔhwe Sirti anhweatam so nti, wohuan hyɛndua no ma ɛtwee yɛn kɔe. 18 Nanso esiane sɛ na mframa a ano yɛ den no retotow yɛn denneennen nti, ade kyee no, wofii ase yiyii hyɛn no mu nneɛma no bi tow gui;+ 19 na ne nnansa so no, wɔde wɔn nsa yiyii hyɛn no ho nneɛma tow gui. 20 Afei, bere a owia ne nsoromma ampue nna bebree, na mframa+ a ano yɛ den bɔɔ yɛn no, anidaso a ɛwɔ hɔ sɛ yebenya nkwa nyinaa fii ase yerae. 21 Bere a aduan nkaa wɔn ano bere tenten no, afei Paulo sɔre gyinaa wɔn mfinimfini+ kae sɛ: “Mmarima, nokwasɛm ni, ɛsɛ sɛ anka mutie m’afotu no na yɛansi nsu ani amfi Kreta ammehyia asiane ne adehwere a ɛte sɛɛ.+ 22 Ne nyinaa akyi no, mereka akyerɛ mo sɛ momma mo bo ntɔ mo yam, efisɛ mo mu ɔkra biako mpo renyera, gye hyɛn no nkutoo. 23 Anadwo yi me Nyankopɔn a meyɛ ne dea a mesom+ no no bɔfo+ begyinaa me nkyɛn 24 kae sɛ, ‘Paulo, nsuro. Etwa sɛ wugyina Kaesare+ anim, na hwɛ! Onyankopɔn de wɔn a wɔne wo te hyɛn yi mu nyinaa ama wo kwa.’ 25 Enti mmarima, momma mo bo ntɔ mo yam; na mewɔ Onyankopɔn mu gyidi+ sɛ ɛbɛba mu pɛpɛɛpɛ sɛnea wɔaka akyerɛ me no. 26 Nanso yɛbɛkɔ akogu supɔw bi so.”+ 27 Afei eduu anadwo a ɛto so dunan a na yɛredi akɔneaba wɔ Adria po so ɔdasum no, hyɛn mu adwumayɛfo no tee nka sɛ wɔrebɛn asase bi. 28 Na wɔtow susuhama no kɔɔ nsu no ase na wohui sɛ ɛyɛ abasam aduonu; enti wɔkɔɔ kakra na wosusuwii bio hui sɛ ɛyɛ abasam dunum. 29 Na esiane sɛ na wosuro sɛ ebia yɛbɛkɔ akɔhwe abotan so nti, wɔtow asɛkyɛ anan fii hyɛn no akyi, na afei wɔn yam a na anka ade akye. 30 Nanso bere a hyɛn no mu adwumayɛfo fii ase hwehwɛe sɛ wobeguan afi hyɛn no mu no, wɔhyɛɛ da gyaa ɔkorow ketewa no mu sii po so na ɛyɛe sɛ nea asɛkyɛ no mmom na wɔpɛ sɛ wɔtow fi hyɛn no anim gu nsu no mu, 31 enti Paulo ka kyerɛɛ ɔsraani panyin ne asraafo no sɛ: “Sɛ mmarima yi antena hyɛn yi mu a, muntumi nnya nkwa.”+ 32 Ɛnna asraafo no twaa hama a ekura hyɛmma+ no mu ma ɛkɔe. 33 Afei ade reyɛ akye no, Paulo hyɛɛ wɔn nyinaa nkuran sɛ wonnidi, na ɔkae sɛ: “Dadu nnanan ni a moakɔ so awɛn adi mmuada a momfaa aduan nkaa mo ano. 34 Mo akwahosan nti, mesrɛ mo munnidi; efisɛ mo mu biara nni hɔ a ne ti nhwi+ biako mpo bɛyera.” 35 Bere a ɔkaa eyi no, ɔno nso faa paanoo daa Onyankopɔn ase+ wɔn nyinaa anim na obubu fii ase dii. 36 Enti wɔn nyinaa ani gyei na wɔn nso fii ase didii. 37 Sɛ wɔka yɛn nyinaa bom a, na akra a yɛwɔ hyɛn no mu yɛ ahanu aduɔson asia. 38 Bere a wodidi mee no, wofii ase totow awi a ɛwɔ hyɛn no mu guu po mu sɛnea emu bɛyɛ hare.+ 39 Afei bere a ade kyee no, na wonhu asase no na mmom wohuu faka bi a ɛda mpoano, na wosii wɔn bo sɛ sɛ ɛbɛyɛ yiye a, wɔde hyɛn no bɛkɔ hɔ.+ 40 Enti wotwitwaa asɛkyɛ no ma eguu po mu, na bere koro no ara wɔsansan akyerɛkyerɛkwan hama no, na wɔmaa hyɛn no anim mframatama no so hwɛɛ mframa no ma wokoduu mpoano. 41 Bere a wokogyinaa anhweatam bi a ɛda po mfinimfini so no, hyɛn no anim kotimii na ɛkaa hɔ, na hyɛn no akyi bubui asinasin.+ 42 Afei asraafo no yɛɛ wɔn adwene sɛ wobekunkum nneduafo no sɛnea ɛbɛyɛ a obiara ntumi nguare nguan nkɔ. 43 Nanso na ɔsraani panyin no pɛ sɛ ogye Paulo nkwa, enti wamma wɔn kwan wɔ nea wɔbɔɔ wɔn tirim sɛ wɔbɛyɛ no ho. Na ɔhyɛɛ wɔn a wobetumi aguare no sɛ wɔntow wɔn ho ngu po no mu nni kan nkɔ asase so 44 na wɔn a aka no mmutubutuw ntaboo so ne hyɛn no mu nneɛma bi so. Na saa na ɛyɛe na wɔn nyinaa duu asase so dwoodwoo.+
Asomafo Nnwuma 27